Wargeyska The Business daily: Jaadka Kenya waxaa uu ciriiri kala kulmayaa suuqyada Soomaaliya | Saxil News Network
Wargeyska The Business daily: Jaadka Kenya waxaa uu ciriiri kala kulmayaa suuqyada Soomaaliya
June 20, 2019 - Written by editor
Beeraleyda Meru ayaa dhaqale badan ka sameeya Jaadka
Wargeyska the Business daily ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa kusoo warramay in dowladda Kenya ay ku guda jirto sidii suuq horleh ay ugu heli lahayd khaadka ama jaadka ka soo baxa dalkeeda.
Kenya ayuu wargeyska sheegay inay u tafa-xeydaneyso sidii suuq horleh ay uga heli lahayd dalalka Jabuuti iyo Mozambique, xilli jaadka laga keeno Kenya uu tartan adag kala kulmayo khaadka Itoobiya ee la geeyo Soomaaliya.
Guddi dowladda Kenya ay u xil saartay ka tala bixinta sidii loo horumarin lahaa jaadka Meru ka baxa ayaa dhawaan la filayaa inay tagaan dalka Itoobiya, si ay usoo indha indheyaan qaabka lagu horumarin karo ganacsiga jaadka, maadaama Itoobiya ay ka mid tahay dalalka dhoofiya Jaadka.
Dadaalka loogu jiro sidii suuq horleh loogu heli lahaa jaadka Kenya ayaa yimid, kadib markii khaadka ama jaadka Kenya laga mamnuucay Ingiriiska iyo dalal kale oo Yurub ah, taasi oo khasaara iyo caqabad horleh ku keentay beeraleyda khaadka ee Kenya, waxaan wargeyska uu kusoo warramay inay jiraan dalal kale oo ku hanjabay inay mamnuuci doonaan in jaadka la geeyo dalalkooda.
Warqad uu guddoomiyaha guddigaas, Kello Harsama uu u qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayuu ku sheegay inay ka go’an tahay sidii loo heli lahaa suuq horleh oo badela suuqyadii ay lumiyeen beeraleyda jaadka ee Kenya.
“Guddiga horumarinta jaadka waxay qorsheynayaan inay booqdaan dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Mozambique, si ay ula kulmaan wasaaradaha maaliyadda, beeraha, dadka badeecadaha ka keensada dibadda iyo ganacsatada dalalkaas, si ay u fahmaan bal in ay u baahan yihiin in jad ay soo dhoofsadaan iyo sida lagu gaari karo in wax taya leh loo dhoofiyo,”ayaa lagu sheegay warqadda loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya.
Image captionKhaadka ama Jaadka ayaa laga cunaa deegaanada Soomaalida
Kimathi Munjuri oo kamid ah guddigaas ayaa sidoo kale wargeyska u sheegay in ay la kulmeen urur ay ku mideesan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya, si ay u fahmaan loolanka ka jira suuqyada jaadka.
“Waxaan la kulanay ururka ay ku mideesan yihiin ganacsatada jaadka, si aynu u fahano waxa ay doonayaan, tallaaba xigta waxa weeye in aan la kulano dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, si aynu u ogaano doorka dowladda ee horumarinta ganacsiga jaadka,” ayuu yiri Munjuri.
Wuxuu intaa raaciyay in inkastoo dowladda Itoobiya ay beerto 50 nooc oo jaad ah, haddana aysan jirin mid la barbar dhigi karo jaadka ka baxa magaalada Meru ee dalka Kenya.
Itoobiya ayaa la sheegay inay dhoofiso jaadka laga cuno Somaliland iyo Jabuuti, oo waxaa uu wargeyska tusaale usoo qaatay Somaliland oo uu sheegay in canshuur badan ay ka soo gasho, halka Jabuuti na maalin walba loo dhoofiyo 16 tan oo jaad ah, dowladda dalkaas na ay sanadkii ba ka hesho dakhli dhan 17 milyan oo doolar